Muslimiinta Jabaan ee dhaladka ah oo aad u kordhey iyo dhib ka haysata helida - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Muslimiinta Jabaan ee dhaladka ah oo aad u kordhey iyo dhib ka haysata helida
Waxa ILAAHAY mahadii ah in Muslimiinta dalkaasi sanam caabudka ee Jabaan uu kordhey. Muslimiinta Jabaan oo markii ugu horeysay dalkaasi yimi kacaankii Ruushka ee 1917 oo u badnaa Turki ayaa tiradoodu aad u yarayd.
Sanado badan oo soo galaati xoogsata yimi dalkaasina waxa kordhey tirada Muslimiinta soo galootiga ah oo hadda sanado kahor maraysay 150 kun ayaa hadda maraysa 300 oo kun oo Muslimiina.
Haddaba tirada muhiimka ah ayaa ah Jabaanka dhaladka ah oo iyagu tiradoodu aad u yarayd waqtiyo hore haddase lagu qiyaasay inay gaarayaan 100 kun.
Muslimiinta Jabaanka oo jooga dal sanam caabuda ayaa hadda masaajidu u kordheen dhibna kuma qabaan meel ay ku tukadaan, waxase dhib weyni ka haysaa meelihii ay ku aasan lahaayeen meydkooda.
Goob ay Muslimiintu iibsadeen ayaa waxa kahor yimi dadka deegaanka oo sheegay in biyaha ay cabayaan halis ku jiraan, ayagoo jaahilnimo awgeed qaba in meydka halkaas lagu aasay uu biyaha ku dhexmilmayo.
Sanam caabudka Jabaan ayaan iyagu lahayn xabaalo meydka lagu aaso ee marka uu bakhtiyo isla markaaba la gubo sida Hindida. Dhawaan ayay ahayd markii Muslimiinta Siirilanka uu sanam caabudka dalkaasi u diidey inay xabaashaan meydkooda.